စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 100 အခမဲ့လှည့်ဖျား Starburst | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 100 အခမဲ့လှည့်ဖျား Starburst | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 100 အခမဲ့လှည့်ဖျား Starburst
2.ဒီဆုကြေးငွေအကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် 00.01 ကြာသပတေးနေ့ 25 သြဂုတ်လနှင့် 23.59 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 31 သြဂုတ်လ 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
3.ဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, ကစားသမားမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းငွေသွင်းခြင်းနှင့် Starburst အပေါ်အာမခံရပါမည်.
4.ထိုမြှင့်တင်ရေးကာလအတွက်£မှ 50 အထိကစားသမားသိုက်သူတို့လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည် အကယ်. 100 အခမဲ့ Starburst ပေါ်မှာကစားရန် spins.
5.ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 100 Starburst အပေါ်တစ်နေ့လျှင်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ, လှည့်ဖျားနှုန်း 10p မှာတန်ဖိုး.
7.အလှည့်ခြင်းများကနေရရှိခဲ့ပါတယ်အနိုင်ရရှိ 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းဆုကြေးငွေပမာဏကိုသယ်လိမ့်မည်
8.သာကဤဂိမ်းအပေါ် wagering: Starburst, Gonzo ရှာပုံတော်, အမွှာလည်, Spinata Grande, ထုချွန်းပုံ, piggy စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, South Park, ဂျက် Hammer, ချိတ်သူရဲကောင်းများ, ငါ့ကို dazzle, နီယွန် Stax, Dracula, ဂျက်နှင့် The Beanstalk, အောင်မြင်သော, ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Rush, အလင်းအိမ်, ဒစ္စကိုလှည့်ဖျား, Koi မင်းသမီး, ဒဏ္ဍာရီလာအိမ်ထောင်မကျခင်, Sparks, စတစ်ကာများ, မှော် Portal, Blackjack Classic, အသီးဆိုင်, ပန်းပွင့်, မျှော်စင် Steam, Fisticuffs, ကံကောင်း Angler, လေဆင်နှာမောင်းခြံနဲ့ Escape, Subtopia, ဂျက် Hammer 2, ဘစ်ဘန်း, invisible က Man, South Park2ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Chaos, slot ဘုရင်, ဂြိုလ်သား, တောက်ခြင်း, Guns N Roses, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏မဟာ, ဒရိုက်ဗ်အာမခံလိုအပ်ချက်များ၏လျှော့ချရေးဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်ပါလိမ့်မယ်.
9.အောက်ပါပိုက်ဆံအိတ်အအာမခံလိုအပ်ချက်ဆီသို့ဦးတည်နှင့်ဤနိုင်ရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်: ရီးရဲလ်ငွေစာရင်း, အပိုဆုပြီးတော့ FreeSpin ဆုကြေးငွေ.
11.ထိုအာမခံမီကရန်ပုံငွေဆုတ်ခွာပြီးပြည့်စုံသည်အကောင့်အားလုံးကိုဆုကြေးငွေနှင့်ဤ attribute ရဲ့ဆိုအနိုင်ရရှိကိုပယ်လိမ့်မည်.
12.ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေများအတွက်တရားဝင်နေဆဲအသိအမှတ်ပြု7နေ့ရကျ. သငျသညျဤကာလအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်မထားသင့်, ဒီမြှင့်တင်ရေးမှကျန်ရှိသောဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများကိုသင့်အကောင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည်.
13.ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာ FreeSpin ဆုကြေးငွေတစုံတယောက်မျှအချိန်တွင်တက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “ငါ့အကောင့်” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆုကြေးငွေတန်းစီကြည့်ရှုရန်အပိုင်း
14.စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, မဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ (သိ. သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို) မည်သည့်အချိန်တွင်နှင့်ကြိုတင်သတိပေးချက်မပါဘဲ.
15.စံသတ်မှတ်ချက်များကို & အခွအေနလျှောက်ထား.